Waxaad tahay ku cusub suuqgeynta webka ? Shirkadiina waa ay socotaa isbedelka digital oo waa inaad kudhajisaa jargon cusub? Habab cusub? Ama aad si fudud u rabto soo hel aasaaska suuq geynta internetka ? Kadib tababarkan fiidiyowga ah, ee loogu talagalay dhagaystayaasha bilowga ah ayaa adiga lagaa dhigay.
Baro lingo oo abuuro istiraatiijiyad suuqgeynta websaydhkaaga
In this tababarka, Waxaan kuu soo gudbin doonaa jidka a istaraatijiyad suuq geynta webka shirkad dooneysa inay iibiso alaabada jirka, alaabada dhijitaalka ah ama xitaa adeegyada. Waxaan arki doonnaa jaantuska istaraatiijiyada suuq geynta ee shaqeyneysa ka dib dhammaan hubka la heli karo si loo kiciyo xoogaa yareyaal kabayaal ah oo u oggolaanaya istiraatiijiyaddan inay shaqeyso.
Tababarku wuxuu u qaybsan yahay dhowr qaybood. Waxaan ka bilaabi doonnaa ku saleysan…
Abuur istiraatiijiyad suuqgeyn kuu gaar ah Diisambar 28, 2020Tranquillus